KANADA: 17 Jir Soomaali Ah Oo Sameeyay Telefoon Casri Ah...
KANADA: 17 Jir Soomaali Ah Oo Sameeyay Telefoon Casri Ah
Toronto (Dhamays) – 17-sano jir Soomaali-Kanadiyan ah ayaa sameeyay Teleefoon casri ah, ka dib markii hooyadii ay u awoodi weyday in ay u iibiso Telefoonkii uu doonayay, waxaana dedaal dheer ka dib u suurtagashay in meel hoose uu ka bilaabo farsamaynta Mobilkiisa.
Wiilkan yar oo lagu magacaabo Maxamed Cumar ayaa horumarinta telefoonkiisa oo lagu magacaabo ‘Frank’ bilaabay isaga oo kaashanaya saaxiibkii Fahad Alhatab oo 25 sano jir ah, waxaana talefoonkan cusub oo lagu iibinayo qiime dhan 180 dollar si weyn looga hadal hayaa suuq-yada caalamka, gaar ahaan Afrika.
Telefoonkan cusub ayaa leh kamarad 16 Megapixel ah, shaashad ama Muraayad 5.5 inch ah iyo 4GB oo ah Raamka ama Maskaxda uu wax ku qaadayo, iyada oo taasi ay sii dheer-tahay adeegga suulka ama Faraha kale oo Qofka u suurtagalinaysa in Cid kale ayna Telefoonkiisa adeegsan karin amar la’aan ama ogolaansho la’aan.
“Waxa uu leeyahay adeeg kasta oo aad ka heli lahayd Telefoonnada caadiga ah, qiimahiisauna aad uma sareeyo “ ayuu yidhi Cumar oo la hadlay BBC-da, isla-markaana sheegay in Telefoonkiisu noqon doono kii ugu casrisanaa Taarikhda cusub oo laga isticmaalo gudaha Kanada mustaqbalka dhow.
Cumar xiligan la joogo ma gali karo heshiisyo ganacsi oo waa weyn , ababo la xidhiidha Da’diisa oo ah mid aad u yar, waxaana heshiisyada sharciga u saxeexi hooyadii si uu horumarin ugu sameeyo Shirkaddiisa cusub.
“Waxaan eegi jiray waxyaabaha ay ka samaysan-yihiin Telefoonnadu in badan , Run ahaantiina Telefoonnadu kama samaysna waxyaabo ad adag “ ayuu yidhi Cumar oo sheegay in tan iyo yaraantiisa uu jeclaa tiknoolajiyadda casriga ah.
Waxa uu sheegay in ka dib markii uu qiimayn ku sameeyay aaladaha uu Telefoonnada Gacanta ku kooban yihiin iyo qiimaha Telefoonada laga siiyo suuqyada ay tahay mid xad ka bax ah, isla-markaana shirkadaha Telefoonnada iibiyaa ay qiimo laga bad-badin ah siiyaan Mobile-da ay suuqyada keenaan.
“Tani waa wax caqli ka bax ah, waxaana go’aansaday in aan soo saaro Telefoon casri ah oo jooga qiima ka hooseeya kuwa shirkadaha kale “ ayuu mar kale sheegay Cumar oo tilmaamay in shirkadaha waa weyn ay macaamiishooda dhibaataynayaan.
Maxamed Cumar wuxuu sheegay in dedaalka uu ku hirgeliyey farsamaynta Telefoonkan Casriga ah ay ku dhiiri-geliyeen Labadiisa Waalid.
Ugu danbayn, waqooyiga Ameerica ayaa noqon doonto suuqa ugu weyn ee Telefoonkan casriga ah ee Frank.
Previous: Suuqyada Somaliland Oo Laga Waayay Khudaar Iyo Dawladda Oo Ka Hadashay Sababta Keentay
Next: Duufaanka Maria Oo 15 Qof Oo Ku Dishay Jaziiradaha Dominica